Abwaanka Caanka Ah Ee Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi Oo Ku Guulaystay Abaalmarin Caalami Ah | Araweelo News Network (Archive) -
Abwaanka Caanka Ah Ee Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi Oo Ku Guulaystay Abaalmarin Caalami Ah
Amsterdam(ANN) Abwaanka Soomaaliyeed ee caanka ah Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi, ayaa ku guulaystay Abaalmarin Caalami ah oo sanadkiiba mar la siiyo dadka kusoo kordhiya dhaqanka iyo horumarinta caalamiga ah bulshada ay la noolyihiin, taas oo ay bixiso Aqalka
Boqortooyada ee waddanka Holland.
sida lagu sheegay qoraal saxaafadeed kasoo baxay xarunta dhaqanka Redsea Online Abwaan Hadraawi wuxuu ka mid noqday 11 qof oo sanadkan lagu sharfay abaalmarintaa caalamiga ah. qoraalka ay soo saartay xarunta Redsea Online, ayaa u qornaa sidan:- ” Kow iyo toban isugu jira maskax-maallo, abwaanno, filim-sameeyeyaal iyo ururro ka socda dalal kala duwan, ayaa ku guulaystay aqoonsi caalami ah oo sannadkiiba mar lagu sharfo dadka wax qiime leh kusoo kordhiya dhaqanka iyo horumarka bini-aadamka. Aqoonsigaas oo ay bixiyaan Prince Claus Fund, oo ah sanduuq-faneed ku xidhan Aqalka Boqortooyada ee waddanka Holland, waxa la siiyaa dadka wax soo saarkooda maskaxeed qiime aad u sarreeya leeyahay, islamarkaana uu saamayn wayn ku yeesho bulshada uu qofkaasi la noolyahay.
Redsea Online Culture Foundation waxa ay u riyaaqeen sharafta uu karaamada uu leeyahay aqoonsigani, waxana ay ugu hambalyaynayaan abwaanka in adduunyadu aqoonsatay qiimaha sare ee waxsoosaarkiisa maskaxeed u leeyahay koritaanka bulshada iyo qiimaha aadamiga.
Ka eeg warbixin dheeraad ah halkan:princeclausfund.org ama halkan:redsea-online.com